Blockchain News 17 Janoary 2018 - Blockchain News
Janoary 17, 2018 Admin
Blockchain News 17 Janoary 2018
Blockchain ETFs nanomboka tamin'ny NASDAQ sy NYSE Arca
Mizara ny zava-misy sy hanamafy Advisors Trust ETF nanomboka ny voalohany blockchain fifanakalozana ara--varotra vola (ETFs) amin'ny Nasdaq sy ny New York Stock Exchange Arca amin'izao fotoana izao.
nizara zava-misy’ ETF nisokatra amin'ny $24.20, raha ny ETF hanamafisana nanomboka ho akaiky kokoa $20.
Samy ETFs irery ihany no vola amin'ny orinasa mifototra blockchain-.
Kian Salehizadeh, ny mpandalina amin'ny zava-misy nizara nanao hoe::
“Tsy te hanao ny blockchain teknolojia-mifandray ETF, ka tsy olon-kafa bitcoin famatsiam-bola, fa zavatra izay mandray manararaotra ny fototra tontolo iainana.”
Raha ny SEC tsy ara-dalàna namoaka fankatoavana ny ETFs, ny tsy fisian'ny ofisialy dia midika ny tsy fankasitrahana ireo tonga dia neken'ny ETFs ambanin'ny lalàna amin'izao fotoana izao, nanazava Salehizadeh.
Amin'izao, ny SEC manana 75 andro mba hamoaka ny tsy fankasitrahana na fanoherana any amin'ny iray ETF famenoana. Raha tsy izany tsy fankasitrahana na fanoherana dia voalaza, ny vola azo lisitra.
Zavatra banky lehibe indrindra mikasa ny hanomboka fifanakalozana cryptocurrency
Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) ny fandefasana ny fandraisana an-tanana ny hanokatra fifanakalozana vaovao sy hamoaka ny vola virtoaly manokana: ny "MUFG vola."
Ny banky koa mifehy ny hasarobidin'ny ny vola madinika, izay mikendry ny ho sarobidy eo ho eo 1 Yen. Ireo mpampiasa dia afaka mampiasa ireo vola madinika avy eo, jerena amin'ny finday avo lenta, mba handoavana ny entana sy ny asa ao amin'ny lamaody azo antoka.
MUFG dia mikendry ny hampitombo ny fananganan-jaza amin'ny mpamatsy sy ny mpaninjara manerana an'i Japana ho an'ny sehatra ny fandoavam-bola ary mikendry ny hanomboka amin'ny taona taty aoriana.
MUFG Efa nampahafantatra ny Financial Services Agency eo amin'ny drafitra mba hamoaka vola madinika sy hanokatra fifanakalozana. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ hanao fanomanana feno ny MUFG famoahana vola madinika, amin'ny drafitra mba hikarakara fifaninanana mba hiteraka hevitra noho ny raharaham-barotra ny fampiasana ny vola madinika MUFG tamin'ny Martsa.
Mba hanorina virtoaly fanakalozam-bola ao Japana, dia tsy maintsy mba hisoratra anarana any amin'ny Financial Services Agency, ary mbola misy vato misakana sasany sisa.
Ny Mitsubishi UFJ Financial Group, ny foibeny in Chiyoda, Tokyo, no lehibe indrindra Japana vondrona ara-bola ary ny 2 banky lehibe indrindra mihazona orinasa eto amin'izao tontolo izao, mitana manodidina $1.8 tapitrisa tapitrisa USD.
MasterCard ny CFO: Cryptocurrency boosting fividianana ireo mpanjifa ny fandaniana
Mastercard dia nahita ...
Ny dikan-Bitcoin vaovao Core manohana tanteraka SegWit-adiresy
Softfork SeqWit naka ...
Previous Post:Blockchain News 16 Janoary 2018
Next Post:Cryptocurrencies rehetra